Ahoana no hampiofanana alika be fanahiana amin'ny sakafo | Tontolo alika
Ahoana no hampiofanana alika be fanahiana amin'ny sakafo
Ny fomba fihinanan-kanina tsara dia azo ampiharina amin'ny alika ihany koa. Anisan'izany, manana ambaratongam-pahefana izy ireo, izay hajaina hatrany. Miaraka aminao izy ireo dia tokony hanana fanajana koa, ka ny volom-borona tsirairay dia tsy maintsy ampianarina, indrindra raha a alika be fanahiana miaraka amin'ny sakafo.
Izay hohanina dia fahatsapana madioIzany no mahatonga ny alika maro miteraka fitaintainanana. Mampianatra a alika be fanahiana amin'ny sakafo dia somary sarotra izany, satria saika manokana fotsiny no ifantohan'izy ireo. Mila faharetana ianao, fa kosa hataonao hanaja ny toerana misy anao sy ny anao.
Ny zavatra voalohany tokony hataonao dia ny manangana a toerana sy fotoana ho an'ny sakafo. Tsy voatery ho tonga amin'ny fotoana marina izy io, fa tsy maintsy manaraka ny mahazatra, satria zavatra manome fiarovana azy ireo izany. Ho fanampin'izany, izany dia hanakana anao tsy hangataka sakafo amin'ny fotoana hafa amin'ny antoandro. Mitebiteby foana izy ireo rehefa miandrandra ny hisakafo. Izany no antony tokony hiandrasanao azy ho tony hanome azy azy ihany koa.
Rehefa mametraka ny sakafo ianao dia tsy maintsy sakano tsy hidona momba azy. Tsy maintsy averina amin'ny laoniny ny habakao, mahatonga azy hihemotra raha manakaiky izy. Tokony hanaja anao izy ary tsy hihinana raha tsy avelanao. Amin'ny alika kely, dia ny fahazarana azy ireo, fa raha alika efa antitra ianao dia mila hentitra kokoa.
Famantarana iray hafa koa fa manaja anao izy ireo amin'ny fotoam-pisakafoanana dia izy ireo avelao aho handray ny viliao amin'ny fotoana rehetra. Ny alika be fanahiana dia mety ho lasa mahery setra mihitsy, koa raha tsy manana fampiharana ianao dia afaka manontany mpikarakara iray. Raha matoky ny alikao ianao dia andramo aloha ny manosika azy amin'ny lohalinao ary esory amin'ny tongotrao ilay vilia. Asaivo miandry izy ary avelao izy hihinana rehefa lazainao azy.
Toro lalana iray hafa tena manandanja amin'ireo alika ireo ny aza manenjika olona rehefa mihinana zavatra izy ireo. Mba hanaovana izany dia tsy maintsy asaivo mametraka elanelana izy, ho tonga lafatra fa mankatoa anao izy ary mijanona ao amin'ny fandrian-tranony na amin'ny toerana nolazainao.
Fanazavana fanampiny - Fahadisoana mahazatra rehefa mampiofana ny alika
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Tontolo alika » Alika ankapobeny » Training » Ahoana no hampiofanana alika be fanahiana amin'ny sakafo
Fihanaky ny tranon-jaza ao am-bavany
Ahoana ny fomba hanaovana cookies an-trano ho an'ny alikanao